Ny lahateny nataon'ny Praiminisitra (tapany faharoa) - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Politika ankapoben’ny Fanjakana
Ny lahateny nataon'ny Praiminisitra (tapany faharoa)
Araka ny Lalampanorenana ao amin'ny andininy faha 99 izay milaza fa ao anatin’ny telopolo andro nanendrena azy no anoloran’ny Praiminisitra ny fandaharan’asany momba ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakana amin’ny Antenimiera izay afaka manome tolo-kevitra. Notontosaina ny 16 aogositra teo izany ka ny 4. Ny sehatry ny Tontolo iainana . 5- Ny lafiny Sosialy no atolotra amin'izao tapany faharoa izao.
Ny tapany voalohany dia hitanao ao amin'ity rohy ity
4. NY SEHATRY NY TONTOLO IAINANA
4.1. ANGOVO SY RANO FISOTRO MADIO HO AN’NY REHETRA ANTOKY NY FIVOARANA SY NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA NY ANGOVO SY NY RANO.
Mahakasika manokana ny angovo sy ny herinaratra dia hampitomboina avo roa heny ny famokarana herinaratra ao anatin’ny 5 taona. Hampiasaina bebe kokoa amin’izany ny angovo azo havaozina mbahampihenana tsikelikely ny fampiasana solika mahazatra antsika sy hifehezana ny saran’ny famokarana.
Efa natomboka ireo asa hoenti-manangana ny foibe famokarana herinaratra avy amin’ny rano ao Sahofika, hamokatra sivifolo ambizato mégawatts (190 MW), ary Volobe, hamokatra roapolo ambizato megawatts (120 MW). Ezahina ny hamita tanteraka ireo foibe famokarana herinaratra ireo alohan’ny faran’ny taona 2023.
Hanamboatra tobim-pamokarana herinaratra mitambatra (Centrales hybrides) isika amin’ny tanana 45 izay hamokatra hatrany amin’ny 40MW amin’ity taona 2019 ity ary anisan’izany Ambanja, Sambava, Antalaha, Nosy Be, Manajary, Ihosy, Betroka, Ranohira, Antsohihy, PortBergé, Mampikony, Toamasina, Sainte-Marie, Morondava, Ambovombe, Toliara, Miarinarivo, ...
Efa vita ny fanamboarana ny toby famokarana herinaratra avy amin’ny biomasse (jatropha) ho an’ny tananan’i Tsihombe.
Marihana etoana fa isan’ny laharam-pahamehana miaraka amin’ny JIRAMA ny fanamboarana na ny fanatsarana ny foto-drafitrasa famatsiana herinaratra ny renivohitry ny Distrika rehetra eto Madagasikara. Noho izany, efa mijery akaiky ny fanatsarana ny fitantanana ny orinasa JIRAMA isika amin’izao fotoana izao ka raisina ho laharam-pahamehana amin’izany ny fanavaozana tanteraka ireo fifanarahana amin’ny mpandraharaha mpampanofa milina izay mitondra fatiantoka miavosa ho an’ny orinasa JIRAMA.
Ny ezaka goavana izay hatao ihany koa dia ny hanafoanana ny vesatry ny trosa ao amin’ny orinasa JIRAMA. Hisy koa ny ezaka manokana mahakasika ny vidin-jiron’i JIRAMA mba hampihenana tsikelikely ny tsy fitoviana ny vidin-jiro any amin’ny faritra (péréquation tarifaire) Hotohizana ihany koa ny fanomezana herinatra mivantana ny eny Ambanivohitra.
Hahazo herinaratra avy amin’ny rano (hydro-électricité), amin’ity taona 2019 ity, ny kaominina ambanivohitra 48 amin’ireto Distrika ireto: 15 ao Ambatondrazaka, 1 ao Amparafaravola, 2 ao Moramanga, 6 ao Bealanana, 3 ao Antsohihy, 3 ao Ambohimahasoa, 3 ao Tsiroanomandidy, 5 ao Anjozorobe, 1 ao Manjakandriana, 7 ao Ambositra ary 2 ao Toamasina II.
Hahazo herinaratra avy amin’ny masoandro (énergie solaire), amin’ity taona 2019 ity, ny kaominina ambanivohitra 28 amin’ireto Distrika ireto: 3 ao Antsiranana II, 1 ao Ambilobe, | ao Ambanja, 1 ao Ambalavao, 11 ao Toliara II, 2 ao Morombe, 1 ao Ambovobe, 1 ao Bekily, 2 ao Ampanihy, 1 ao Betioky, 2 ao Betafo, 1 ao Brickaville ary 1 ao Mahajanga II.
Hitarina amin’ity taona 2019 ity ny tambajotran’ny herinaratra ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Sambaina, Manjakandriana, Sahanivotry (Antsirabe II) ary Fandriana.
Ho an’ireo toeram-ponenana lavitry ny tambajotra dia hanaovana ezaka manokana ny fanapariahana ireo fitaovana isa-tokantrano manome herinaratra avy amin’ny masoandro “Projet kits solaires Johary”. Hanomboka amin’ny volana septambra ho avy izao ny fanapariahana ireo “kits” ireo ka mihoatra ny iray hetsy (100.000 kits) ny tokantrano hisitraka izany amin’ity taona 2019 ity ary hahatratra roa hetsy (200.000 kits) izany manomboka amin’ny taona 2020. Marihana manokana fa hirary ny vidiny hivarotana azy ireo ary ho azo aloa tsikelikely mba hitsinjovina ny fahefa-mividin’ny vahoaka.
Mahakasika ny rano dia hampitomboina ny famatsiana rano fisotro madio ho an’ireo mpiarabelona manerana ny Nosy ary hatevenina ny asa efa natomboka eo amin’ny sehatry ny fanadiovana sy ny fidiovana.
Momba ny famatsiana ny faritra Atsimon’ny nosy manokana dia efa vita ny tambazotran’ Ampotaka izay mamatsy rano fisotro madio ny tananan’ny Sempeza, Beloha, Tsihombe, Ampotaka, Tranovaho, Marovato, Faux Cap. Ho vita amin’ny voalohan’ny taona 2020 ny tambazotran’i Sampona izay hamatsy ny tananan’ Amboasary, Maroalomainty, Maroalompoty, Ankilikira. Ary tsy maintsy hatomboka amin’ny taona 2020 ny fanamboarana ny tambazotran’i Bemamba.
Ho vitaina alohan’ny faran’ity taona 2019 ity ihany koa ny fanatsarana ny famatsian-dranon’ny tananan’Antananarivo sy ny manodidina azy (Grand Tana). Anisan’izany ny faritra Atsinanana (Ambohimangakely, Ambohimahitsy, Mahazo, Ambatomaro), ny faritra Andrefana (Itaosy, Ambohidrapeto), ny faritra Avaratra (Sabotsy Namehana, Ilafy, Lazaina), ny faritra AvaratraAndrefana (Ankandindravola, Ivato, Ambohidratrimo, Ambohitrimanjaka) ary ny faritra Atsimo (lavoloha, Mahalavolona, Alasora, Andoharanofotsy).
Ho vitaina toy izany koa ny fanamboarana na ny fanarenana ny famatsian-drano an’ireto tanana ireto : Ambanja, Ambilobe, Ambato-boeny, Antsirabe, Mananjary, Miarinarivo, Sambava, Toliara, Tsiroanomandidy, Kandreho, Mahabo, Marovoay, Vohémar, Ambatondrazaka, Antsohihy,Maintirano, Morondava, Ihosy, Antalaha, Belo sur Tsiribihina, Antsiranana, Fianarantsoa ary Toamasina.
Marihana etoana fa isan’ny laharam-pahamehantsika ny fanamboarana na ny fanatsarana ny foto-drafitrasa famatsian-drano ny renivohitry ny Distrika rehetra eto Madagasikara.
Momba ny Famatsiana solika dia nanao ezaka lehibe ny fitondram-panjakana tamin’ny fampihenana ny vidin-tsolika ho an’ny mpanjifa. Kanefa mbola misy Distrika 40 eto Madagasikara no tsy manana toby fivarotana solika (station-service).
Amin’ ity taona 2019 ity dia Distrika 5 amin’ireo mbola tsy manana no hahazo toby vaovao: 3 no efa vita (Anjozorobe, Andilamena, Mahabo), 2 eo andalam-panorenana (Ifanadiana, Belo-surTsiribihina). Tsy maintsy misy toby fivarotana solika iray farafahakely ny Distrika rehetra eto Madagasikara alohan’ny taona 2023.
4.2. FITANTANANA MAHARITRA NY HARENA VOAJANAHARY
Manomboka amin’ity taona 2019 ity ny fametrahana ny foto-drafitrasa maitso (infrastructure verte) amin’ny alalan’ny fambolen-kazo ka ny ezaka hatao dia ny fambolen-kazo ho an’ny velaran-tany efatra alina hektara (40.000 ha) isan-taona eran’ny Madagasikara.
Mahakasika ny fiarovana ny ala dia atao laharam-pahamehana ny fanomezan-danja ny toekarena maitso (économie verte) sy ny toekarena mifampitsinjo (économie circulaire). Noho izany, hatomboka tamin’ity taona ity ny tetikasa fanodinana ny fako anakitelo, dia ao Toamasina, Antsiranana ary Antananarivo Avaradrano, mba azo hampiasaina hanoloana ny arina na saribao. Hatomboka tamin’ ity taona ity ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana mba hahafahana mametraka fivarotana antsinjarany ny entona (tavoahangyna gaz 1 hatramin’ny 4 kilao).
Eo amin’ny harena an-kibon’ny tany dia atao izay hifehezana haingana amin’ny fomba manara- drafitra ny fitantanana ireo harena an-kibon’ny tany sy ireo loharanon-karena stratejika. Hatsaraina ny lalàna mifehy ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto amintsika mba hametrahana ny tanjona hisian’ny tamberina fampandrosoana ho an’ireo tanana sy ireo faritra rehetra manankarena eo amin’ny lafiny harena an-kibon’ny tany.
Ny volana Septembra 2019 ho avy izao dia hotohizana ny fanatsarana ny fitantanana ny fahazoan-dalana hitrandraka ny harena an-kibon’ny tany. Ny volana Desambra 2019 dia hapetraka ny foibe ho an’ny volamena sy ireo vato sarobidy ary koa ny fanatsarana ny fomba sy fepetra fampidiram-bola amin’ny asa fitrandrahana. Hotohizana ihany koa ny fametrahana mari-drefy ny fangaraharana amin’ny fitantanana ny vola amin’ny sehatry ny harena ankibon’ny tany, izany dia hovitaina alohan’ny volana jona 2020.
Noho izany, hatramin’ny volana Desambra 2020 dia hampidirina amin’ny sehatra manaradrafitra ny mpitrandraka volamena miisa roa hetsy (200.000 orpailleurs), ny mpanangona volamena diman- Jato (500) ary “Comptoirs de l’or” miisa dimampolo (50) no hatsangana.
Alohan’ny faran’ny volana Jona 2020 dia hosokafana ny fanomezana fahazoan-dalana mitrandraka harena ankibon’ny tany vaovao miisa dimampolo (50 PE), ny fahazoan-dalana mikaroka harena ankibon’ny tany miisa dimanjato (500 PR) ary ny fahazahoan-dalana hitrandraka ho an’ireo mpitrandraka madinika miisa dimanjato (500 PRE).
Mba hahazoantsika tombontsoa betsaka eo amin’ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany dia tsy maintsy atao ny fampihenana ny fanondranana ireo akora fototra mbola tsy voahodina amin’ny alalan’ny fametrahana orinasam-panodina manakaiky ireo toeram-pitrandrahana ary ny fampiofanana ireo mponina manodidina izany.
5. NY LAFINY SOSIALY
5.1. FANABEAZANA SY FIOFANANA HO AN’NY REHETRA
Hiantohan’ny fanjakana ny fahafahan’ny olona rehetra mahazo fanabeazana sy fiofanana mahomby, indrindra ho an’ny zaza sy tanora Malagasy. Hamboarina hanaraka ny fenitra ny sekoly. Hampifanarahina amin’ny filan’ny tsenan’ny asa ny fanofanana omena ny tanora. Hapetraka any amin’ny faritra ireo foibe fanofanana arak’asa ho an’ny tanora. Havaozina hifanaraka amin’ny fivoaran’ny teknolojia ny fitaovana enti-mampianatra any anivon’ny EPP, CEG, Lycée ary Oniversite.
Ao anatin’ny fampandrosoana ny kaominina andraisan’ny rehetra anjara sy ny fitsinjarampahefana dia hisy EPP vaovao ahitana efitra 12 miisa telopolo (30) hatsangana amin’ity taona 2019 ity, any amin’ireto toerana ireto : Andemaka-Vohipeno, Ifanadiana, Farafangana, Manja,
Mitsinjo-Toliara, Matsaborilaidama-Ambilobe, Soavina-Betafo, Brickaville, SahalavaFianarantsoa, Ambatolahy- Fianarantsoa, Ankadinandriana-Antananarivo Avaradrano,
Antanetibe-Ambohimangakely, Iavoloha Atsimondrano, Antanimena- Tana Ville, AmbohipoTana-Ville, Ankorondrano-Tana Ville, Ambodirano-Tana Ville, Analamahitsy-Tana Ville,
Andranomena-Tana Ville, Alakamisy-Ambositra, Morombe, Ampitsaharana-Soavinandriana,
Befalafa-Taolagnaro, Andranomadio-Tsiroanomandidy,Beandrarezona-Bealanana, SahavoloFenerivo Atsinanana, Asabotsy-Ambatondrazaka, Amborovy- Mahajanga, Andrefatsena-Ihosy, Antanimbarinandriana-Vohemar.
Misy ihany koa ny fananganana CEG vaovao valo (8) ahitana efitra 24 amin’ireto toerana ireto: Analamahitsy-Tana Ville, Soamahamanina-Miarinarivo, Analamalotra-Toamasina II , Manakara,
Anivorano Avaratra, Tsararano-Mahajanga I, Tanambao Taolagnaro, TsimahavaokelyMorondavaLycées vaovao enina (6) ahitana efitra roa ambinifolo no hatsangana koa amin’ity taona ity dia aoTongarivo-Tanjombato, Vatomasina-Vohipeno, Ambondromamy-Ambatoboeny, Fanandrana- Toamasina II, Scama-Antsiranana I, Mahavatsy I-Toliara.
Hisy ihany koa manomboka amin’ ity taona ity:
• Ny fananganana toeram-piofanana momba ny fambolena ahitana efitra roa ambinifolo (12) miisa iraiky ambinifolo (11) manerana ny nosy ao Soavina-Betafo, Vatomandry, Maevatanana,Andoharanomaintso-Isandra, Bealanana, Brickaville, Antampon’i Ihorombe, Tsihombe,Tsiroanomandidy, Ambilobe ary Moramanga.
• Ny fanamboarana Ivo-toeram-piofanana arak’asa fototra ahitana efitra roa (2) amin’ireto toeranasivy ambinifolo (19) ireto: lakora, Ambohimahasoa, Ikongo, Soanierana Ivongo, Anosiben’ Ala,Beloha, Manja, Antanambao Manampotsy, Port-Bergé, Morombe, Ikalamavony, Vondrozo,Soalala, Besalampy, Morafenobe, Kandreho, Ambinagny-Antalaha, Sainte-Marie, Mananjary
• Ny fanokafana ny “cantines scolaires” ho an’ireo faritra lavi-dalana sy marefo ao anatin’ny faritra Androy, Antsinanana, Vakinankaratra ary Analamanga
• Ny fanamboarana dabilio miisa sivy arivo sy iray alina (19.000) haely eran’ny nosy
• Ny fizarana boky miisa roa tapitrisa (20.000.000 de livres) ho an’ny mpianatra hiatrika fanadinana
• Ny fizarana “kits scolaires” amin’ny endriny vaovao.
Amin’ity taona 2019 ity dia hotohizana ny fanamafisana fahaiza-manao ho an’ireo mpampianatra rehetra. Efa napetraka ny vaomiera manokana mba hisahana ny fanapahankevitra amin’ny fandraisana mpampianatra amin’ny sekolim-panjakana rehetra. Izany no natao dia mba hialana amin’ny fitongilanana sy ho fanomezan-danja ny mangarahara.
Ny taona 2020 dia ho tohizana ny ezaka fanatsarana ny fampianarana sy fiofanana ara-teknika sy arak’asa eto amintsika. EPP vaovao ahitana efitra 12 miisa 63, CEG vaovao ahitana efitra 24 miisa 8, Lycées vaovao ahitana efitra 12 miisa 6, Toeram-piofanana momba ny fambolena ahitana efitra roaambinifolo (12) miisa 15, Ivo-toeram-piofanana arak’asa fototra ahitana efitra roa (2) miisa 21 no hatsangana eran’ny faritra roa amby roapolo (22).
Hotohizana ny fanamboarana dabilio ka tsy tokony hisy intsony amin’ny taona 2020 ny mpianatra mipetraka amin’ny tany ao am-pianarana any amin’ny sekoly rehetra manerana ny nosy. Hotohizana ihany koa ny fividianana boky ho an’ny mpianatra sy ny fizarana kits scolaires.
Raha momba ny Fampianarana ambaratonga ambony dia napetraka ho laharam-pahamehana ny fanamboarana Oniversite 4 ho an’Antsirabe, Fénérive-Est, Soavinandriana ary Morondava ka hatomboka ny volana septambra 2019 ny fananganana azy ireo. Ny taona 2020 dia hatsangana ny Oniversite miisa enina (6) hafa koa ho an’Ambovombe, Mandritsara, Antalaha, Ambatondrazaka, Farafangana ary Ihosy.
5.2. FAHASALAMANA: ZO FOTOTRA HO AN’NY OLOMBELONA
Hampitomboina ny teti-bola ho an’ny fahasalamam-bahoaka. Laharam-pahamehana ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman’ny zaza latsaky ny 5 taona sy ny reny bevohoka ary ireo zokiolona. Hatsaraina ny fampitaovana ny hopitaly sy ireo toeram-pitsaboana samihafa. Efa amperin’asa ireo fiarabe fitsaboana 11 alefa any amin’ireo faritra saro-dalana sy lavitra ny toerampitsaboana.
Efa napetraka ny fepetra momba ny fiarovana ny valan’aretina toy ny pesta, ny ebola, ny bonibony. Efa mipetraka ny paik’ady hisoroana sy hiadiana amin’ireo valan’aretina ireo ary efa miasa andro aman’alina ny rafitra mandrindra ny asa hiatrehana an’izany. Momba ny Ebola manokana dia tohizana ny fanamafisana ny fanaraha-maso (surveillance et dépistage) eo amin’ireo tobin-tseranam- plaramanidina sy seranan-tsambo eto Madagasikara ka foibe fanaraha-maso ara-pahasalamana valo (8) no efa miasa ao Antsiranana, Nosy Be, Mahajanga, Ivato, Toamasina, Toliara, Taolagnaro, Sainte- Marie.
Ho fampiroboroboana ny fahasalamana eny ifotony sy fampanarahana fenitra ny toerampitsaboana dia efa an-dalana ny fanamboarana ireto foto-drafitrasa vaovao ireto:
Toeram-pitsaboana fototra CSB miisa telo ambinifolo (13) manaraka ny fenitra sy mitovy firafitra no hatsangana amin’ity taona 2019 ity any Motombositra-Beloha, AmbodiranoVondrozo, Ankaratra- Ambilobe, Sendrisoa-Ambalavao, Ranohira-lhosy, Ambatomitsangana-
Soavinandriana, Mahatsara Ilafy-Ambatondrazaka, Ambonivohitra Ambatondrazaka, BekodokaBesalampy, Manja, Talatan’ Angavo-Ankazobe, Antetezanintsina-Antalaha ary ManjarivoManakara.
Efa an-dalana ihany koa ny asa fanamboarana hopitaly manara-penitra “Centres Hospitaliers de District” (CHD) miisa telo ambinifolo (13) any amin’ireto distrika ireto: Analalava, Mandritsara, Mampikony, Antanambao Manampotsy, Beloha Androy, Antsalova, Ankilizato, Manandriana, Ambohimahasoa, Vohibato, lakora, Ivohibe, Vondrozo.
Hamboarina manomboka amin’ ity taona 2019 ity ihany koa:
• Ny « Centre Hospitalier de Référence Régionale » (CHRR) vaovao any Maintirano
• Ny « Unité de transplantation rénale » eny amin’ny CHU Andohatapenaka ka ao anatin’izany ihany koa ny hanokafana ny unite de hémo-dialyse maimaimpoana
• Ny fampitaovana ny CHD Beloha Androy, Manandriana ary Ambohimahasoa amin’ny « matériels techniques de blocs opératoires » ary torak’izany ihany koa ny ho an’ireo CHU miisa 11 eran’i Madagasikara
• Ny fanamboarana ny Ivo-toerana fitsaboana ny fo sy ny voa ao Befelatanana.
Amin’ny taona 2020 dia hatao ary hamafisina ny fampitaovana ireo toeram-pitsaboana vaovao maro namboarina tamin’ny taona 2019 ireo.
Ny taona 2020 dia hotohizana ny fanamboarana CSB miisa 13 dia ny any Ambatoaranana (Antanifotsy), Ilanjana (Manandriana), Antanivony (Fandriana), Maroanakomby (Ambatofinandrahana), Belintsaka Tanambao (Ambatofinandrahana), Belavenona Janjina (Ambatofinandrahana), Ambohitsaony (Ambatofinandrahana), Mahatsara Soalazaina (Ambatondrazaka), Vatolatsaka (Betioky Sud), Befotaka, Mahatalaky (Taolagnaro), Beampombo (Betroka) et Beangily (Bekily).
Efatra amby ny folo (14) ny CHD vaovao hamboarina amin’ny taona 2020 dia ny any Andramasina, Anjozorobe, Ambatomainty, Vavatenina, Port-Berge, Befandriana Avaratra, Antanifotsy, Soanierana- Ivongo, Amboasary Atsimo, Mitsinjo, Bekily, Lalangina, Mandoto ary Vohipeno.
Amin’ny taona 2020 ho avy izao dia:
• Hotohizana ny fampitaovana ny CHD manerana ny Faritra 22.
• Homena fitaovana ny CHU (Centre hospitalier universitaire) Analamanga ka anisan’izany ny « Bunker » ao amin’ny HJRA Hatsangana ny “radio numérique” ary hampiana ny toeram-pandidiana any Mahajanga.
• Hatsangana any Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa ary Toliara ny “Unités de nephrology” miaraka amin’ny “Centre de hémo-dialyse” maimaimpoana. 
• Hampiana ny toeram-pandidiana any Toliara.
Ny fanarenana ny tobim-pahasalamana efa misy eran’ny nosy dia hotohizana hatrany.
Ankoatr’ireo rehetra ireo dia horaisin’ny Fanjakana an-tanana ny fitsaboana ireo tena sahirana. Hisy ny tahirim-bola hatokana amin’izany ka miainga avy any amin’ny Fokontany ny fifantenana ireo olonatena sahirana hisitraka izany.
Amin’ny taona 2020 dia hisy ny tetibola hatokana handraisan’ny Fanjakana an-tanana ny fitsaboana ireo zokiolona mihoatra ny dimy amby enimpolo (65) taona sy ny reny bevohoka ary ny zaza latsaky ny dimy (5) taona.
5.3. TOERAM-PONENANA SY FANANANTANY
Laharam-pahamehana ny fanorenana tanana vaovao isaky ny renivohi-paritany rehetra. Koa ho an’Antananarivo dia ny fametrahana ny foto-drafitrasa “Tanamasoandro” dia hatomboka amin ity taona 2019 ity.
Ankoatr’izay dia trano fonenana miisa dimy alina (50.000) no hatsangana eran’ny nosy ao anatin’ny dimy taona. Ezahina ny hanorenana fonenana mendrika ho an’ireo tokantrano marefo miisa valopolo amby zato (180). Hatomboka ihany koa amin’ity taona ity ny fanamboarana trano fonenana ao Fianarantsoa, Toliara ary Mahajanga miaraka amin’i orinasa SEIMAD ary ny trano fonenana any Toamasina, Antsiranana sy Antananarivo miaraka amin’i orinasa ANALOGH.
Ao anatin’izany rehetra izany, dia hotohizana ny ezaka hahafahana manampy ireo tantsaha Malagasy hahazo karatany ka faritra 10 no hisitraka izany (Bongolava, Amoron’i Mania,
Matsiatra Ambony, DIANA, SOFIA, Boeny, Androy, Alaotra-Mangoro, Antsinanana, Analamanga). Eo ankilan’izany dia handraisana fepetra manokana ireo antontan-taratasy tsy ara-dalana ka nahazoana tanim-panjakana tamin’ny fomba tsy mendrika.
Hovitaina amin’ity taona ity ny « Guichet unique foncier » ka birao miisa sivy (9) no hatsangana amin’ity taona ity: Befandriana Avaratra, Sakaraha, Andapa, Bealanana, Amparafaravola, Vangaindrano, Betafo, Ambatofinandrahina, Ambalavao. Eo anilan’izany dia hapetraka ihany koa amin’ny taona 2020 ny Birao Ifotony ny Fananan-tany (BIF) amin’ireto toerana ireto: Mahajanga II, Toliara Il, Vavatenina, Ambatoboeny ary Faratsiho.
Biraon’ny fananan-tany miisa telopolo sy roanjato (230) no hatsangana ka ny taona 2019 amin’ny faritra Analamanga, Itasy, Analanjirofo ary ny taona 2020 any amin’ny faritra Atsinanana sy Vakinankaratra.
Tsy zoviana amintsika fa fanamby goavana ny mahakasika ny fananan-tany eto Madagasikara ka noho izany dia ezaka maro no hatao. Anisan’izany ny fanamarinana sy fanomezana “Titres Fonciers” miisa dimanjato sy efatra arivo sy iray alina (14.500 titres fonciers) ary “Certificats fonciers” miisa dimy arivo sy telo alina sy iray hetsy (135.000 certificats fonciers) amin’ity taona 2019 ity. Mahakasika izay ihany, ny vina ho an’ny taona 2020 dia “Titres Fonciers” miisa roa arivo sy telo alina (32.000) ary “Certificats fonciers” miisa dimy hetsy (500.000) no ho vitaina.
5.4. FAMPIVOARANA ASA MENDRIKA ARY FANOMEZAN-DANJA MANOKANA NY VEHIVAVY SY NY
Omena tosika ireo tanora lahy sy vavy izay mamorona asa amin’ny alalan’ireo tetikasany.
Ny Programam-pirenena “Fihariana” dia fitaovana iray lehibe hahatongavana amin’ny fampiroboroboana ny asa mendrika ho an’ny tanora eto amintsika.
Omena fiofanana ho matihanina eo amin’ny sehatry ny fihariany ihany koa ireo tanora tantsaha ary ho tolorana tany izy ireo (Titre vert). Hapetraka ny banky hamatsy vola manokana ny fandraharahana ara-toe-karena ary hamoraina ny fisitrahana izy ireo izany. Noho izany dia omena vahana ny fifaninanana masina, fampirantiana sy famokarana eny anivon’ny faritra rehetra. Hisy ireo fepetrahoraisina hahafahan’ny vehivavy misitraka ny fanampiana ara-teknika amin’ny famoronana asa mampidi-bola sy mahavelona.
Efa natao ny ezaka manokana nampiakarana ny karama farany ambany ho roa hetsy ariary (200.000Ariary). Homena lanja ny asa fitiliana any amin’ny orinasa ataon’ny Sampana fandraharahana ny asa eran’ny nosy.
5.5. FAMPIVOARANA SY FAMPITAOVANA ARY FAMETRAHANA NY TANORA MALAGASY AMIN’NY TOERANA MENDRIKA
Ny tanora, araka ny tenin’ny Filoham-pirenena ombieny ombieny, no ankehitrinin’ny Firenena. Noho izany dia ampiana sy tohanana araka ny tokony ho izy ary faran’izay tratra izy ireo. Ankoatra ny fanohanana efa voatanisa etsy ambony dia homen-danja lehibe ny fitaizana sy famolavolana azy ireo ara-panatanjahan-tena.
Hapetraka ny fomba rehetra hanatanterahana ny programma “sport-études”. Torak’izany ihany koa ny fametrahana vatsim-pianarana ho an’ireo mpianatra sy mpiofana ara-panatanjahan-tena mendrika.
Ezahina ny hametraka ny sata manokana ho an’ny atleta matianina. Ezahina ihany koa ary hatsaraina hatrany ny fampitaovana ireo federasiona rehetra.
Hapetraka eto Madagasikara ny “Bureau permanent d’alliance de haut niveau pour le sport et l’éducation physique en Afrique”. Vina lehibe tokoa izy io mba ho fanatsarana hatrany ny fanofanana sy fitsinjovana ny tanora Malagasy.
Hatsaraina sy havaozina ihany koa ny fiofanana arak’asa maharitra ho an’ireo mpampianatra EPS sysport-santé sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny miasa eny anivon’ireny ivon-toerana mikarakara ny tanora ireny.
Ho fanatanterahana ny vinan’ny Filoham-pirenena, momba ny fanatanjahan-tena sy ny fampivoaranany tanora dia hatsangana sy harenina ary havaozina ireo foto-drafitrasa maro isankarazany atoanatin’ny fe-potoana fohy ny taona 2019-2020.
Ao anatin’izany ireto programan’asa ireto:
• Fananganana Académie Nationale des Sports avo lenta ao amin’ny Foto-drafitrasan’ny Tanamasoandro sy any amin’ny renivohi-paritany dimy hafa
• Fanavaozana ny kianjaben’i Mahamasina mba hahazaka olona hatramin’ny dimy alina (50.000)
• Fananganana stades ary gymnases manara-penitra any amin’ny renivohi-paritra izay mbola tsymisy
• Fanamboarana dobo filomanosana manara-penitra (piscines olympiques) any amin’ny renivohi- paritany enina (6) sy ao Antsirabe. Efa hatomboka amin’ity taona ity ny any Mahajanga sy Toliara
• Fananganana boulodromes misy gradins any amin’ny renivohi-paritra roa amby roapolo (22) maneran’ny nosy
• Fanavaozana ny Académie Nationale des Sports ao Ampefiloha Antananarivo
• Fametrahana sy fampitaovana ny foto-drafitrasa « Parcours de santé » any amin’ny renivohi- paritany enina (6) ka hatomboka amin’ity taona ity ny any Fianarantsoa sy Antananarivo Fanavaozana ary fampitaovana ny Institut National de la Jeunesse ao Carion
• Fananganana Courts de tennis manara-penitra any amin’ny renivohi-paritany enina (6) ka hatomboka amin’ity taona ity ny eto Antananarivo.
5.6. SERASERA SY KOLOTSAINA
Momba ny serasera dia hatao laharam-pahamehana ny fanitsiana ny lalana momba ny serasera amin’ny haino aman-jery. Hapetraka ny Autorité Nationale de la Régulation de la Communication Médiatisée na ANRCM.
Hezahina manokana ny fampanarahana toetr’andro ny haino amanjerim-bahoaka (ORTM).
Hoezahina amin’izany ny fanatsarana ny fandraisan’ny kaominina rehetra manerana ny nosy ny haino amanjerim-bahoaka.
Havaozana ny Centre d’Etudes et de Formation Multimédia (CEFOM) ao Maibahoaka Ivato mba hanaraka ny filana takian’ny toetr’andro.
Ankoatra izany dia mitaky kolontsaina mifanaraka amin’ny tena maha-Malagasy izay mampivoitra ny soatoavina lovain-jafy ny fanantanterahana izao programan’asa izao.
Tohizana ny famerenana indray ny fanabeazana ny maha-olom-pirenena ka efa ampiasaina fatratra amin’izany ny haino aman-jerim-bahoaka. Hatevenina ny ezaka mba hanentanana ny rehetra amin’ny fitiavana, ny fanajana ary ny fikolokoloana ny fananana iombonana amin’ny alalan’ny Asa tagnamaro.
Havaozina ireo vakoka ara-kolontsaina sy ara-tantara maro dia maro misy eran’i Madagasikara ary hanamboatra mozea koa isika hampirantiana ny harem-bakoka ananantsika manerana ny faritra maro.
Tsara ny manamafy etoana fa ho vitaina alohan’ny volana Jona 2020 ny asa famitana ny Rovan’ Antananarivo.
Farany, hanomboka amin’ity taona ity ny asa fanamboarana ny Akademia Nasionaly Taozavatra sy Kolontsaina na “Académie Nationale des Arts et de la Culture” mba hahafahantsika manofana sy mampivoatra ireo ho tena matihanina amin’ny sehatry ny kolontsaina. Tanjona ny hitantanantsika amin’ny tokony izy ireo harena rehetra ananantsika eo amin’ny sehatry ny kolontsaina.
Mazava izao ny tanjona tiana ho tratrarina dia « NY HANENJIKA NY FAHATARAN’I MADAGASIKARA ARY HAMPANDROSO AZY EO AMIN’NY SEHATRA REHETRA ».
Ny fanatanterahana ity programan’asa ity dia mila diplomasia mavitrika izay hanamafy sy hanatsara hatrany ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ho fampandrosoana maharitra an’i Madagasikara. Efa natomboka ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny anjara andraikitr’ireo masoivoho Malagasy rehetra any ivelany. Ho tendrena tsy ho ela ireo Ambassadeurs na Chargés d’Affaires na Consul hitantana ireo masoivoho ireo. Hiompana bebe kokoa amin’ny lafiny fifandresen-dahatra ara-toe-karena sy ara- barotra iraisam-pirenena manomboka izao ny diplomasia Malagasy.
Hiezaka koa isika hanatanteraka ireo tetik’asa rehetra voatanisa ato anatin’ity programan’asa ity amin’ny alalan’ny herintsika sy ny vokatry ny harentsika. Kanefa tsy atao an-kilabao ny fiarahamiasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka amintsika. Ao anatin’izany dia efa natomboka ny fandrafetana ny Drafi-pirenena ho amin’ny fampandrosoana na “Plan Emergence Madagascar” 2019-2023 mba handrindrana ny asa sy ny ezaka hanandratana ny firenena.
Ny tao-trano tsy vitan’ny irery, ilaina indrindra indrindra koa ny fahaizana miara-miasa sy fahaizana mandrindra ny asa atao: koa manainga antsika eto anivon’ny Antenimieram-pirenena, manentana ihany koa antsika vahoaka Malagasy rehetra tsy an-kanavaka mba hifanome tànana an-kitsipo sy am- pirahalahiana ho fampandrosoana maharitra ny firenena.
Eto am-pamaranana dia ambarako etoana ny fahavononan’ny Governemanta tarihiko amin’ny fanatanterahana haingana ity programan’asa ity. Misaotra indrindra anareo rehetra ny tenako nampiantrano sy nandray izao famelabelarana izao.